Yaa wuxuun cuna oon waxbaba qaban. |
Tuke Somalism, March 17, 2016
Hibo Ciise — February 10, 2016
Businessman Sleeping on the Job --- Image by © Sean Justice/Corbis
Wax tarkiisu waa wax yeelo iyo wadne cadaad, hadaad tidhaa dabkaa igu soo dhaji waa habeenkii xaley ahaa oo tagey inuu kugu soo dhajiyo, caajiska iyo caga jiidnimadu waa u caado, daandaansiga iyo damacuna waa dabeecadihiisa lagu yaqiin, af xumada iyo gacan ka hadelkuna way ka horeeyaan. Danihiisa intuu yaraa waa loo raaci jirey imakana raaco baa loogu taaglaayahey, Abadan!, hooyadii waxey intaa naawileysay inuu sidan mar uun dhaami doono, Nimaad dhashey kuma dhalin. Waalidku ina jecelaa inaguna dhib iyo dhago adeyg badaninaa, watii la odhan jirey “midi saawira iyo madax muuqda midna lagama quusto”, rajada samaha iyo yididiiladu ka buuxdo ayaa la taraarey Hooyo Baxsan.
Waxa uu aad uga helaa in goor iyo ayaan wax kasta loo soo diyaariyo waliba cuntada iyo cabitaanka, abateedkiisuna waa masha allah. Sheekadiisu waa Yaa waxuun cuna oon waxbaba qaban. cid alla cid uu amaan iyo abaal toona ugu hayaan majirto hawsha loo hayo hadh iyo habeen, far haddaad saartidna shantuu ku saarayaa, xoogana xamaal ayaad moodaa.
Dugsiga markuu tago waxa aan rabshad iyo dhibaato aheyn lagama dheefo, waalidkii waa u dacwad iyo hadal joogto ah, isagana waa u dagaal iyo nabaro noloshiisa qeyb ka noqdey, Wadna-qabad imika waa nin weyn oo dugsi sare sii gabagabeynaya, waxa laga rajeynayaa inuu jaamacad bilaabo si uu hadhawto naftiisa uun wax ugu tari lahaa.
Kala war la,a isna tu habaar qabto ah oo aan loso duceyn ayey ku heshiiyeen guur, oo haddii loosoo duceeyay ma Wadna-qabad bey usoo dhawaan laheyd? May, Guurkiisii cidna kama farxin aan ka aheyn hooyadii Baxsan oo iyadu aan ka quusan marnaba, laga shaqee oo reer loo dhis balse yaa u hayn dee?!! Waagu markuu baryo iyo gabalku marku dhacaba buuqa iyo qeylada kama danto gurigiisa, gabadhiina goor aan habeena aheyn maalina aheyn bay ka huleeshay markuu lafaheeda u dili gaadhey.
Isagiina khayr muu soo sidine maalinkii danbe nin dhawr kalmadood dhex mareen ayuu abley sudhey, ula kaase, dabadeedna xagaa iyo xabsi daa,in.
Next post How to Create a New Business Plan ||Tukesomalism.com
Previous post Faa’iidada wax aqriska u leeyahay Bulshada.